Lapho Udinga Amandla Ommeli e-UAE | Izinkampani Zomthetho eDubai
Lapho Udinga Amandla Wommeli e-UAE
ukugunyaza omunye umuntu
Amandla wommeli yithenda esemthethweni noma idokhumenti esayinwa ngumuntu (evame ukubizwa ngokuthi 'uthishanhloko') egunyaza omunye umuntu (obizwa ngokuthi 'umenzeli' noma 'ummeli-ku-iqiniso') ukuthi enze egameni likathishanhloko ku- phambi kwabantu besithathu.
MANJE Isikhathi Esifanele!
Yini Amandla Wommeli
Ukunikeza Amandla Wommeli kuncike ekutheni unamandla angakanani ummeli, umenzeli angaba yinoma ngubani kusuka esihlotsheni, kumlingani, kumngani, kumqashi noma kummeli.
Amandla Wommeli ayadingeka ezimweni ezikhethekile kumuntu oneminyaka engaphezulu kweyi-18. Isibonelo, izisebenzi zamasosha zathumela phesheya okudinga umuntu ozomenzela zona ngenkathi zingekho.
Intsha eningi ehamba kakhulu ingadinga ukuthi i-Power of Attorney ime ukuze ibhekane nezindaba zayo, ikakhulukazi uma ingenaye umlingani wayo. Indlela ejwayelekile kakhulu i-POA engasungulwa ngayo uma umuntu ebuyiselwa, noma eba nenkinga enkulu yempilo yesikhathi eside engakwazi ukudluliswa kalula.
Amandla ommeli asetshenziswa ikakhulu njengezeluleko zokuqinisekisa ukuthi imiyalelo yenziwa ngentshisekelo yakho.
Uma ungasakwazi ukuzenzela ngokwakho ngenxa yokungakwazi ngokomzimba noma ngokwengqondo, izinqumo zezezimali zingadluliselwa kwi-ejenti ukuqinisekisa inhlala-kahle yakho. Ezinye zalezi zinqumo zibandakanya ukukhokha izikweletu, ukuthengisa impahla ukuze izindleko zempilo zikhokhelwe. Amandla wommeli anikeza imininingwane ngobubanzi nobukhulu balokho okulindeleke ukuthi kwenziwe yi-ejenti.
Izinhlobo Ezihlukile Zamandla Wommeli
Kujwayelekile e-UAE ukuthi abantu noma othishanhloko banikeze amandla ommeli kumuntu omethembayo (owaziwa nangokuthi abenzeli) ukuthwala izinto egameni labo. Kwi-UAE, zingatholakala izinhlobo ezimbili zamandla ommeli:
Amandla jikelele wommeli
Amandla akhethekile wommeli
Amandla Avamile Wommeli
Amandla jikelele wommeli asetshenziswa e-UAE lapho uthishanhloko efuna ukuthi i-ejenti yenze noma iziphi izinto ezilandelayo:
Thenga futhi uphathe indawo ethengiswayo
Yethula uthishanhloko ngaphambi kweminyango kahulumeni, yezemisebenzi, yezokusetshenziswa, kanye neyezinsizakalo zocingo
Faka izinhlaka zomthetho
Thenga amasheya kumabhizinisi asemthethweni
Thenga izimoto nezinto ezibalulekile
Sayina izivumelwano namanye amadokhumenti
Melela uthishanhloko ezindabeni zomthetho bese uqasha abameli
Amandla ahlelwe ngokusobala okusobala amandla anamandla afakwe kuhlu amukelwa ngabantu besithathu neminyango kahulumeni e-UAE.
Kwesinye isikhathi, umuntu wesithathu noma umnyango kahulumeni othembele emandleni abameli angacela ukuthi umenzeli ahlinzeke amandla akhethekile abameli acacisa imininingwane yezentengiselwano lapho umenzeli emele uthishanhloko. Imvamisa, lezi zinhlobo zamacala zifaka:
Ukuthengiswa kwempahla yendawo ethengiswayo
Ukuthengisa kwamasheya ezinhlanganweni ezingokomthetho
Imvume ngumqaphi womshado
Imvume yokuhamba kwezinsana (umuntu ongaphansi kweminyaka engama-21) nomuntu ongeyena umqaphi osemthethweni
Ngabe Asebenza Kanjani Amandla Wommeli?
Umuntu odinga Amandla Wommeli uzoqale akhethe umuntu ozophatha izindaba uma futhi lapho engenamandla okwenza kanjalo. I-POA ingasungulwa ngokushesha lapho umuntu engasakwazi ukwenza izindaba ngokwabo. Lokhu kuqala ukusebenza ngokushesha, ngakho-ke umenzeli angaqala ukusebenza njengothishanhloko.
Kodwa-ke, uma kufanele wenze inkontileka ebopha ngokusemthethweni, amandla othishanhloko kumele kube lapho idokhumenti selakhiwe. Lokhu kusho ukuthi lo muntu uzokwazi ukuqonda imigomo njengoba kushiwo kwinkontileka.
I-POA ingadluliswa noma ichithwe nganoma yisiphi isikhathi ngemuva kokuthi idokhumenti lokuqala selinyamalale futhi selilungisiwe elisha, noma ngokulungiswa kombhalo wokususa ngokusemthethweni osazisa bonke abathintekayo ukuthi i-POA ayisebenzi futhi ukusetshenziswa kufanele kumiswe khona lapho.
Njengoba isi-Arabhu silulimi olusemthethweni lwe-United Arab Emirates, lo mbhalo kufanele ukhiqizwe ngendlela yezilimi ezimbili
Ungasayina Kanjani Amandla Ommeli ku-UAE
Amandla ommeli kufanele asayinwe ku-UAE ngaphambi komphakathi olungisa umthetho ngaphambi kokuba ube semthethweni futhi wamukelekile kubantu besithathu kanye neminyango kahulumeni. Kunezinyathelo ezimbili lapho kungalungiswa futhi kusayiniwe khona amandla ommeli:
1. Lungiselela okusalungiswa
Okusalungiswa kwamandla wammeli kulungiselelwe ngefomethi yezilimi ezimbili (isiNgisi nesi-Arabhu), noma ngefomethi yesi-Arabhu kuphela. Amandla wommeli kumele abhalwe ngokucophelela futhi afake wonke amandla adingekayo i-ejenti okufanele isebenzise uthishanhloko. Lapho amandla ommeli esewulungele, azophrintwa ngokwangempela ukuze asayinwe phambi komphakathi olungisa izivumelwano.
2. Sayina ngaphambi komphakathi olungisa izivumelwano
Kulesi sinyathelo, noma yimuphi umphakathi obona ngokuqokwa e-UAE uzovakashelwa ukusayina amandla ommeli kwinqubo ebizwa ngokuthi yi-notarization yamandla ommeli. Uthishanhloko kuzofanele avele mathupha emphakathini ukuze asayine / azise amandla abameli. Umenzeli akudingeki ube lapho.
Lapho uthishanhloko esayina amandla ommeli, umphakathi olungisa izivumelwano uzovele ushiye isitifiketi bese ubhalisa eyodwa koqobo kumarekhodi asemthethweni asenkantolo bese ubuyisela okwangempela kuthishanhloko. Uma lokhu sekwenziwe, i-ejenti manje isiqalile ukusebenzisa amandla ommeli. Yonke le nqubo ingathatha noma yini ukusuka emizuzwini engama-20 iye kwihora, kuya ngesikhathi sosuku.
Ungasayina Kanjani Amandla Ommeli Ngaphandle kwe-UAE
Ukuze amandla ommeli asayinwe ngaphandle kwe-UAE, futhi asetshenziswe ngaphakathi kwe-UAE, amandla ommeli kufanele abhekane nenqubo yokugunyazwa ngokusemthethweni kanye nokufakazelwa ubuqiniso ezweni lasekuqaleni, kanye nase-UAE. Lokhu kulandela izigaba ezimbili:
1. Ukwenza kube semthethweni kanye nobuqiniso ezweni lendabuko
Lezi zinyathelo ziqala ukwenziwa ngaphandle kwe-UAE ngaphambi kokuba amandla ommeli angeniswe ku-UAE.
Uthishanhloko kumele aqale asayine amandla ommeli ngaphambi komphakathi obambe ngokusemthethweni ezweni elihlala kulo.
Lapho amandla asemthethweni esayiniwe kummeli olungisa izivumelwano, umnyango wezangaphandle noma umnyango ofanayo nohulumeni kulelozwe uyakufakazela lokho.
Inxusa lase-UAE / I-Consadors ezweni elihlala kulo ekugcineni liyoqinisekisa amandla ommeli.
Ngemuva kwesigaba 1, amandla ommeli angalethwa-ke e-UAE inqubo yokuqedelwa ubuyoqedwa. Kulandela lezi zinyathelo:
UMnyango Wezangaphandle we-UAE kumele uqale ugwaze amandla ommeli.
Ngemuva kwalokho kudinga ukuhunyushelwa kusi-Arabhu ngabahumushi abasemthethweni abagunyazwe yinkonzo yezobulungiswa ukwenza ukuhumusha okusemthethweni.
Uma ukuhunyushwa kwe-Arabhu sekuqediwe, uMnyango Wezobulungiswa wase-UAE uzobe uqinisekisa lokhu kuhunyushwa kwamandla kommeli.
Ungawabuyisa Kanjani Amandla Ommeli Bese Ufaka Isikhundla Sommeli Wakho
Nganoma yisiphi isikhathi lapho ukhetha, amandla ommeli angahoxiswa kungakhathalekile ukuthi yisiphi isizathu noma injongo yakhe. Ukuze wenze lokhu, ukuhoxisa kufanele kwenziwe ngokubhala kusetshenziswa isimemezelo se-Revocation of Power of Attorney futhi kufanele kusondelane nommeli wakho eqinisweni. Ifomu le-POA Revocation kufanele lisayinwe ngaphambi komphakathi olungisa izivumelwano, futhi ungathatha isinqumo sokwazisa umenzeli ngebheyili yomphakathi olungisa izivumelwano, noma ngeposi elibhalisiwe.
Uma ufuna ukufaka esikhundleni se-ejenti noma uguqule okuqukethwe kwamandla ommeli, leyo endala kufanele ihoxiswe ngokubhala, ukuze ingabe isasebenza ngokomthetho ngaphambi kokuba kukhishwe amandla amasha ommeli. Amandla wommeli ayayeka ukusebenza lapho uthishanhloko eshona, futhi eminye imibhalo efana ne-Will neTestamente lawo ingena endaweni yayo.
I-POA: Idokhumenti Esemthethweni Ebalulekile
Wonke Umuntu Umuntu Omdala Udinga Amandla Wommeli